Etu ị ga - esi eme ihe omume iri abụọ na abụọ iji gwuo egwu n'ịntanetị ma ọ bụ bipụta - Ọzụzụ Ọmụmụ
Here nọ ebe a: Home » Maka ndị nkuzi » videoguides » Etu ị ga - esi mee ihe omume iri abụọ ka igwu egwu n'ịntanetị ma ọ bụ bipụta
N’isiokwu a, anyị achịkọtala vidiyo iri nke anyị gosipụtara usoro dị iche iche iji mepụta mmekorita na ibipụta ọrụ. Edeputara isiokwu ya, na nke abuo.
1 - Icheta okwu n’eji eji abuo ya eme ihe
Mmụta bụ usoro dị mma ma dị mfe nke na-enye gị ohere ịmepụta egwuregwu mmekọrịta. N'okwu a anyị emebewo ebe nchekwa.
2 - Choo mkpuru okwu abuo nile
Nke a bụ vidiyo kacha ogologo ma sie ike. Ọ bụrụ n’itụtụbeghị ya Icha Ana m akwado ka ị gaa na nke na-esote, ebe anyị ga-alaghachi na isiokwu dị mfe. Maka ndị nwere, nweela ahụmịhe nke usoro a dị oke mma maka ịmụ ka mmemme, m ga-egosi gị otu esi emepụta egwuregwu njirimara njirimara nke ukwuu na mmadụ abụọ ahụ.
3 - Mepụta bingo na-ebi akwụkwọ na ARASAAC
ARASAAC ọ bụ ntụaka maka ndị niile na-arụ ọrụ na nkwalite nkwukọrịta. Araara m ya egwu ọkpụkpọ egwu nye ngwaọrụ ARASAAC dị na ntanetị, mana na vidiyo a, aga m egosi gị otu esi ekepụta blọgụ nke blọọgụ na pịa ole na ole.
4 - Jide ụyọkọ ya na ihe abụọ
Okwu Okwu bụ otu n'ime ụzọ kachasị ekwe nkwa iji mepụta egwuregwu mmekọrịta na-atọ ụtọ. Na vidiyo a anyị hụrụ otu esi emepụta egwu ana - ahụ ihe mgbochi ya na mmadụ abụọ.
5 - Mepụta kaadị imecha nke abụọ iji nweta ihe na-enye ọzụzụ CardCognitivo
Il Ihe eji emeputa kaadi na-enye gị ohere ịmepụta ọnụọgụ pdf na enweghị ngwụcha site na ịhazi parameters.
6 - Egwuregwu ahaziri iche na LearningApps
Ka anyị laghachi azụ Mmụta iji mepụta egwuregwu edemede na ederede, onyoyo na olu!
7 - Esemandy okwu mkpirisi okwu
Educandy bu uzo ozo a na - acho ihe omuma nke n’eme ka imeputa egwuregwu kpochapu (igwu egwu, akara ugburu, ncheta ...) gbakwunyere ihe na-adọrọ adọrọ dika Tris!
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Ugha ụgha! Decisionkwaa mkpebi egwuregwu
8 - Pdf ga - emekọ ihe na LiveWorksheets!
LiveWorksheets bu ikpo okwu na enyere gi aka bulite onyonyo ma obu pdf ma wuo ihe mmekorita na ya. Ebube!
9 - Egwuregwu na-ebi akwụkwọ na ebipụta Okwu
Ka anyị laghachi azụ Okwu Okwu, oge a iji mepụta egwuregwu ndị na-ebi akwụkwọ!
10 - Iji mechaa: Gụ Tachistoscope na Mpepepe si diskette!
N'ikpeazụ, egwuregwu abụọ nke TrainingCognitivo: na tachistoscope e Nsụpe si disk!
Nke ahụ bụ naanị maka edemede a. Ọ bụrụ na ị masịrị vidiyo ndị ahụ ị nwere ike iso anyị na ọwa anyị!
dysorthography, abụọ, italiano, ntụgharị okwu, ide
Etu ị ga - esi mee ihe omume iri abụọ ka igwu egwu n'ịntanetị ma ọ bụ bipụta2020-05-102020-05-10http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/05/doppie.png200px200px
Etu esi eji ARASAAC - Ihe nlere vidiyovideoguides